प्लास्टिक सर्जरी थप र अधिक लोकप्रिय छ। मानिस सधैं परिवर्तन गर्न, समायोजन आफूलाई चाहन्थे छ, र सबै आज सर्जन उपलब्ध उपकरण संग, यो गर्न धेरै सजिलो छ। क्लिनिक विकल्प धेरै कारक प्रभावित, र यसको विशेषज्ञता र डाक्टर को समीक्षा र लेनदेन मूल्य मा। इन्टरनेटमा एक चिकित्सा सुविधा बारे समीक्षा लागि देख कसैले कसैको मित्र को सिफारिस आधारित छ, कसैले बस अनियमित मा चयन। तर कहिले काँही विरामीहरु आफ्नो उत्कृष्ट प्रतिष्ठा भरोसा, विशिष्ट डाक्टर जानुहोस्। Bakov Vadim - प्लास्टिक सर्जन, जसको नाम आफ्नो शरीर को सुधार सञ्चालन रुचि धेरै मानिसहरू चिनिएको छ। उहाँले काम गर्दछ जहाँ राजधानी, वसोवास गर्न, तर पनि अन्य क्षेत्रहरु र पनि देशका मात्र होइन उपचार यस डाक्टर। एउटै ट्यांक व्यक्ति यस्तो ध्यान दिनुपर्छ र धेरै प्लास्टिक सर्जन को किन यो छनौट गर्नुपर्छ? बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
उहाँले कसले हो?
Bakov Vadim - प्लास्टिक सर्जन, जसको फोटो अक्सर फैशन पत्रिका को पृष्ठ मा निस्क्यो। उहाँले तिनलाई थप र थप नयाँ ग्राहकहरु गर्न प्रमुख, त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल मा आफ्नो पृष्ठ मा आफ्नो सेवा विज्ञापन गर्ने धेरै स्थानीय सेलिब्रेटीहरू आफ्नो कामको लागि जानिन्छ। बाल्यकाल देखि सबै भन्दा ट्यांक अनुसार उहाँले आकर्षित उहाँलाई सर्जरी थियो, डाक्टर बन्ने सपना देख्यो। चिकित्सा विश्वविद्यालय बाट स्नातक पछि, उहाँले लगभग तुरुन्त माध्यमिक शिक्षा गर्न थाले।
व्यावसायिक गतिविधि को शुरुवात देखि (1993 मा), ट्यांक को डाक्टर पाठ्यक्रम को एक किसिम पारित गरेको छ, विद्यालय, कायाकल्प, स्तन सञ्चालन, Liposuction, blepharoplasty र धेरै अन्य लोकप्रिय क्षेत्रहरु को नयाँ तरिका मा सेमिनार अब प्लास्टिक सर्जरी हो। क्षणमा उहाँले प्लास्टिक, पुनर्निर्माण र सौंदर्यबोध सर्जरी, प्लास्टिक, पुनर्निर्माण र सौंदर्यबोध सर्जरी लागि अन्तर्राष्ट्रिय कन्फडरेशन को समाज र कम्पनीको रूसी Endoscopic सर्जन यसको युरोपेली खण्ड को सदस्य हुनुहुन्छ। साथै, ट्यांक endoscopic सर्जरी मा वैज्ञानिक प्रकाशनहरू एक नम्बर छ।
Vadim को गफ स्तम्भमा नियमित देखा जो ट्यांक, प्लास्टिक सर्जन, फोटो कागजात भनेअनुसार ग्राहकहरु बहुमत किनभने पूर्व विरामीहरु पहिले नै विज्ञापन उहाँलाई आउँछन्। डाक्टर अनुसार, एक संभावित ग्राहक राम्रो परिणाम र उहाँलाई नजिक कसैले मा postoperative जटिलताहरुलाई अभाव देख्नुहुन्छ भने, उहाँले ठेगाना subconsciously सञ्चालन सञ्चालन गर्ने विशेषज्ञ भरोसा हुनेछ। उनको प्रशंसक लागि भूमिका मोडेल हुन चिनिएका सेलिब्रेटीहरू आफ्नो काम को सर्जन लोकप्रियता थप्छ। डा आफ्नो शास्त्रीय काम जोडती, समय-परीक्षण विधि र उन्नत एन्डोस्कोपी प्रविधि, सञ्चालनहरू न्यूनतम incisions संग प्रदर्शन गर्दै छन् जो छ: यो छ कि यो प्रगति रोक्न छैन टिप्पण लायक छ। Bakov Vadim Sergeevich, प्लास्टिक सर्जन, आफ्नै जो यो पुरानो तरिकामा सञ्चालन गर्न रुचि अरू व्यवसायीक भन्दा एक किनारा दिन, endoscopic सर्जरी को विकास को एक नम्बर प्रदान गर्दछ। यसको ग्राहकहरु गर्न ट्यांक मात्र नवीनतम घटनाहरु प्लास्टिक सर्जरी को क्षेत्र मा, विदेशी विशेषज्ञहरूबाट उधारो, जसलाई उहाँले अक्सर काम गर्न छ प्रदान गर्दछ।
यो पनि काम राम्रो चुनिएको भन्ने Bakov Vadim, एक प्लास्टिक सर्जन टिप्पण लायक छ। उहाँले काम गर्दछ जहाँ क्लिनिक, डाक्टर प्लास्टिक पनि धेरै ग्राहकहरु आकर्षित भएका यसको अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरु लागि ज्ञात छ। विरामीहरु को समीक्षा ट्यांक को यो परिणाम, सम्बन्धित जो, बहुमत र साथ स्तन वृद्धि सर्जरी, आयोजित र प्रक्रिया नरम-लिफ्ट र Liposuction काम गर्दछ हुनत।
ग्राहकहरु सर्जन को मात्र होइन व्यावसायिकता, तर आफ्नो समस्याहरू उहाँलाई आउँछ जो कोहीले आफ्नो ध्यान मनाउन। केही Bakova उहाँले यसरी प्राकृतिक आकार धेरै राम्रो र थप आकर्षक देखिन्छ कि साबित, एक disproportionately ठूलो छाती गरेर dissuaded थियो भन्ने तथ्यलाई लागि धन्यवाद। सर्जन को शब्दमा, सर्जरी लागि तयारी मा, त्यो मात्र होइन ग्राहकहरु व्यक्तिगत इच्छा द्वारा निर्देशित छ, तर पनि विरामीहरु आफूलाई के जो आफ्नो आंकडा, स्वास्थ्य र अन्य धेरै कारक, सधैं लाग्छ। यो ट्यांक सबैभन्दा खोजे-पछि राजधानी मा सर्जन हुन अनुमति दिन्छ। यसलाई आफ्नो ग्राहकहरु जान इच्छुक छन् कि टिप्पण लायक छ यस्तो चिरपरिचित र, महत्वपूर्ण कुरा, एक पेशेवर सर्जन, मात्र वरपरको क्षेत्र, तर पनि अन्य देशका।
कुनै पनि विशेषज्ञ Bakov Vadim रूपमा - प्लास्टिक सर्जन पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया छ। उनि आफ्नो सेवाहरूको अपेक्षाकृत उच्च लागत गर्न ज्यादातर सम्बन्धित छन्। तथापि, ग्राहकहरु यी बरु ठूलो लगानी गरेका छन् रूपमा साँच्चै सञ्चालनको परिणाम संग तिर्नको। सर्जन आफूलाई एक नियुक्ति पटक जन्म पछि स्तन निकाल्न चाहन्थे जो मुसलमान केटी आइपुगे कसरी उहाँको बारेमा कथा भन्नुभयो। सर्जरी पछि उनी आफ्नो घर गए, तर चाँडै फिर्ता क्लिनिक आए। को ट्यांक अनुसार, उहाँले प्रत्यारोपण प्राप्त हुनेछ के को बाल, तपाईंलाई थाहा कहिल्यै आफ्नो पत्नी को एक विधिपूर्वक लागि पैसा धेरै भुक्तानी गर्ने सख्त पति, परिणाम रुचि थिएन थियो। तर सबै डर त्यो त्यो पेट टक गर्न आएको बताए गर्दा हराए: पतिको अघिल्लो सञ्चालनको परिणाम संग धेरै सन्तुष्ट छ, त्यसैले उसले आफ्नो पत्नी उनको शरीर संग सन्तुष्ट थियो, अधिक भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरे।
र भने समस्या हो?
यो कुनै Vadim Bakov, प्लास्टिक सर्जन, आफ्नो काम बारे खराब समीक्षा थप र किनभने, उहाँले भनेअनुसार उहाँले सधैं सञ्चालन परिणाम र उहाँलाई खुसी भनेर बनाउँछ भन्ने सम्भावना छ। पहिले नै यो समय छ किनभने प्रक्रिया केही कठिनाइ थिए भने, सर्जन ढिलाइ बिना अवस्था सच्याउनुहुन्छ उहाँले कार्य पूरा गर्दैन।
त्यो सर्जरी पछि आफ्नो छाती को आकार परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने, ग्राहकको अनुरोध मा प्रत्यारोपण परिवर्तन गर्न - ट्यांक उहाँले स्वीकार मात्र कुरा हो, पहिले नै काम गरेका कुनै पनि पछि सुधार समाप्त।
व्यावसायिकता, अख्तियार पुष्टि
बारम्बार औंल्याए गरिएको छ रूपमा, आफ्नो काम मा प्लास्टिक सर्जन Bakov Vadim Sergeevich प्रतिक्रिया अत्यन्तै सकारात्मक छ। यो मात्र यसको आफ्नै सञ्चालन बाहिर वहन, तर पनि अन्य चिकित्सकहरु र संभावित ग्राहकहरु गर्न परामर्शदाता सेवा प्रदान गर्दछ। पोर्टल को सेट, प्लास्टिक सर्जरी संग सम्बन्धित कुनै पनि बाटो मा, तपाईं सर्जरी को एक विशेष प्रकार सञ्चालन गर्न आफ्नो व्याख्या पाउन सक्नुहुन्छ, अवस्थाको विकल्प छ कि विधि र सम्भावित परिणाम।
र वैज्ञानिक उपलब्धिहरू
डाक्टर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा अधिकार मानिन्छ: उहाँले मात्र होइन अभ्यास सर्जन, तर पनि 40 भन्दा बढी endoscopic सर्जरी मा लेख को लेखक थियो, प्लास्टिक सर्जन गर्न अपेक्षाकृत नयाँ गर्दा अझै पनि। जो यो लगी भएको छ विषयवस्तु, को गहिरो ज्ञान, व्यावहारिक परिणाम संग सैद्धान्तिक ज्ञान को पुष्टि एक सर्जन Bakova को हात मा ग्राहकहरु को एक विशाल संख्या आकर्षित।
उहाँले तिनलाई अनुसार, उहाँले एक जुवाडे थिएन र पनि सबै भन्दा "रोचक" अवस्थामा एक चुनौती हो थिएन हुनत, पनि सबैभन्दा जटिल अपरेसन डराएका छैन: सबै बस एक काम छ।
सम्बन्धित क्षेत्रहरू मा सल्लाह
तर एउटै नाममा एउटै व्यक्ति लेनदेन मात्र संलग्न हुने छैन? समय समयमा Vadim Bakov, प्लास्टिक सर्जन, समीक्षा गर्न र उहाँले काम गर्दछ जहाँ अस्पताल, बाहिर हार्डवेयर प्रक्रियाहरु छोड्नुहोस्। डाक्टर सञ्चालनको आफ्नो विरामीहरु पंथ छैन सर्जरी अन्तिम सत्य बनाउन गर्दैन लागि सिर्जना गर्दैन भन्ने तथ्यलाई, पहिले नै आफ्नो व्यावसायिकता कुरा छ। साँच्चै मात्र उच्च वर्ग विशेषज्ञ र कहिलेकाहीं आफ्नै चासो को हानि गर्न, वैकल्पिक उपचार गर्न सुझाव दिन्छौं। सर्जन को प्रक्रियाहरु बारेमा विस्तृत आफूलाई र हेरफेर दौडान कि sensations बारेमा, र प्रभाव बारेमा बताउँछ। यो, तिनीहरूले प्रतीक्षा गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सम्भावित ग्राहकहरु तयार उहाँलाई अगाडि कुनै पनि हस्तक्षेप डराएका र स्नायु भएकाहरूलाई हेरविचार लाग्छ। व्यावसायिकता र सहभागिता - Bakov Vadim, एक प्लास्टिक सर्जन छ कि मुख्य विशेषताहरु छन्।
तर प्लास्टिक सर्जन को रोचक मात्र छैन समीक्षा Vadim ट्यांक, तर आफ्नै विरामीहरु आफ्नो टिप्पणी छन्। डाक्टर कुनै स्पष्ट कारण लागि सर्जरी गर्न जो जाने बालिका, धेरै सानो टिप्पणी।
सामान्यतया, ग्राहकहरु हस्तक्षेप गर्न ध्यान तयार छन् सबै उपलब्ध जानकारी सङ्कलन, सर्जन सञ्चालन मार्ग बारेमा प्रश्नहरू धेरै सोधे, सामाग्री प्रयोग, सम्भव जटिलताहरू। विशेषज्ञहरु को अनुसार, प्रसिद्ध रोगी साधारण बालिका फरक कुनै छ: गायब र आफ्नो ostentatious bravado र scandalous सर्जन कार्यालय मा - ग्राहकहरु को सबै भन्दा जोखिमपूर्ण पनि हल गर्न सकिँदैन रिकभरी बेला चिकित्सकको निर्देशन उल्लङ्घन गर्छ।
किन उसलाई विश्वास?
सल्लाह किनभने तिनीहरूले बुझ्न Bakova साँच्चै, सुन्न: अनुभव बीस वर्ष संग सर्जन आफ्नै फाइदाको लागि झूठ छैन: यो धेरै महँगो छ आफ्नो प्रतिष्ठा। भरोसा र धेरै consultations डाक्टर इन्टरनेट स्रोतहरू लागि धारण जो, र आफ्नो ग्राहकहरु लागि सुदृढ। ट्यांक आफ्नो नाम मा घमण्ड छैन, र धैर्य पहिले र सञ्चालन प्रक्रिया पछि हुन्छ र बिरामीको गर्न चासो कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्दछ सबै बताउँछन्। साथै, फोटो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन् जहाँ उहाँले काम गर्छ, रेभ समीक्षा धेरै (पूर्व रोगी सर्जन जो तिनीहरूले एक डाक्टर गरे पनि छाती, संकेत गर्न शब्द "Bakovka" पनि आविष्कार) साइटहरु क्लिनिक यसको काम - किन छैन भरोसा विशेषज्ञ छ ?
आफ्नै पदोन्नति सामाजिक सञ्जालका लागि कसले प्रयोग गर्दैन? त्यो Bakov Vadim, प्लास्टिक सर्जन, एक अपवाद। को "इन्स्टाग्राम" आफ्नो पृष्ठमा, तपाईँले आफ्नो विरामीहरु को तस्वीर को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ (डाक्टर पनि पायो आफूलाई आफ्नै ह्यास ट्याग # doktorBakov # BakovVadim), र, उल्लेखनीय, यो सुक्खा छैन तस्वीर आफ्नो कार्यालय मा सर्जन बनाउन "अघि-पछि" गर्छ र सर्जरी पछि केही समय पछि परिणाम हेर्न अनुमति दिने, र बालिका को जीवन फोटोहरू।
साथै, पृष्ठ तपाईं सर्जन एउटा सञ्चालनको सुविधाहरूको बारेमा बताएको केही भिडियो, पाउन सक्नुहुन्छ: यसको लागि संभावित ग्राहकहरु जानकारी यस तरिका हो धेरै धेरै सुविधाजनक (हुनत, पाठ्यक्रम, रद्द गर्न सकिँदैन) व्यक्तिगत परामर्श भन्दा। साथै, ट्यांक र उहाँले काम गर्दछ जहाँ क्लिनिक मा ठाउँ लिन कि कार्यहरू बारेमा थप वार्ता - र यो स्पष्ट थप यसलाई विज्ञापन हो।
र यी सम्बन्ध मा एक सानो व्यक्तिगत
एकै समयमा, हामी एक सामाजिक सञ्जाल मा सर्जन प्रोफाइल विशेष आफ्नो काम गर्न समर्पित भन्न सक्दैन। Vadim Bakov उहाँले साधारण आनन्द विदेशी थिएन कि, उहाँले अरू सबैलाई जस्तै, एक मानिस छ भनेर देखाउने, आफ्नो यात्राको, सम्मेलन र अन्य महत्वपूर्ण घटनाहरू धेरै र शेयर फोटो यात्रा। यो पाठ्यक्रम, (जो उहाँले विभिन्न डिप्लोमा र प्रमाणपत्र को तस्वीर स्वीकार्छन्) अनुभव र उसलाई नयाँ ग्राहकहरु ल्याउन, यो खुला सर्जरी, आफ्नो विरामीहरु तिर आफ्नो न्यानो मनोवृत्ति थियो संभावना छ र।
कुनै पनि उद्योग, त्यहाँ जो दिग्गज छ, मानिसहरू हुन्। प्लास्टिक सर्जन, समीक्षा जो एक जादू छडी द्वारा भने सबै दोष समाधान गर्ने प्रतिज्ञा - यस्तो व्यक्ति को सञ्चालन शरीर सुधार Vadim Bakov छ। क्लासिकल सर्जरी मा, तर पनि endoscopic प्रविधी मात्र होइन विशेषज्ञता डाक्टर आफूलाई, (ग्राहक निकाय अर्थात् न्यूनतम हस्तक्षेप) को रूपमा उहाँले एक संयुक्त सर्जरी र cosmetology मा काम गरिरहेको छ। विरामीहरु गर्न दृष्टिकोण पाउन सक्षम ट्यांक, को हस्तक्षेप को सबै पक्षहरू स्पष्ट गर्न आफ्नो समय पछुताउनु छैन, रोगी जवाफ सबैभन्दा मुश्किल प्रश्न पनि गर्न।
आफ्नो व्यावसायिकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम र सेमिनार देखि धेरै प्रमाणपत्रहरू, साथै वैज्ञानिक प्रकाशनहरू र endoscopic प्लास्टिक सर्जरी को क्षेत्र मा हाम्रो आफ्नै विकासक्रम पुष्टि भएको छ। सबै भन्दा राम्रो को एक काम मास्को, मा क्लीनिक आफ्नो क्षेत्रमा एक पेशेवर - डाक्टर को सबै भन्दा राम्रो सूची जो केवल ट्यांक प्रमाणित गर्छ। उहाँले आफ्नो सबै विरामीहरु हेरचाह र तिनीहरूलाई सम्पर्कमा रहन र पनि सर्जरी पछि, ठूलो व्यावसायिक तर पनि एकदम ध्यान दिएर व्यक्ति मात्र थियो। त्यसैले, तपाईं आफ्नो शरीर मा परिचालन परिवर्तनहरू रुचि राख्नुहुन्छ भने, Bakov Vadim - एक प्लास्टिक सर्जन, साँच्चै र विश्वसनीय गर्न सक्छन् हुनुपर्छ।
Margarita Levchenko संग एक गैर-शल्य facelift: सत्य र मिथकों
कसरी हात युवा फर्कन
निर्माता अग्रणी, Medtech देखि
को जेल वार्निश कसरी लागू गर्न: सुझाव र चाल
इजाजतपत्र बिना शिकार लागि Pneumatics। शिकार pneumatics लागि सबै भन्दा राम्रो के छ
प्रतीकात्मक रूप शहरी विशेष अवसर: सिंह संग हतियार को कोट
Ontogenetic variability। कारण र को मूल्य
राजा जर्ज 5
होटल Eftalia मारिन रिसोर्टमा5* होटल (टर्की, Alanya): फोटो र समीक्षा
Elling - यो के हो? को boathouse मा आराम। समीक्षा